Raad Raac News Online – 17 Dagaalamayaal ka tirsan Alshabaab oo Duqeyn lagu dilay.
17 Dagaalamayaal ka tirsan Alshabaab oo Duqeyn lagu dilay.
Moos Bukeeni May 14, 2017 Comments Off on 17 Dagaalamayaal ka tirsan Alshabaab oo Duqeyn lagu dilay.
Saraakiisha Ciidamadda Amniga Dowladda Somalia ee Gobalka Gedo ayaa si rasmi ah u shegay in duqeyn dhanka cirka ah lagu dilay Dagaalamayaan ka tirsan Maleeshiyadda Kooxda Alshabaab.
Duqeyntan ayaa si toos ah loola beegsaday laba Gawaari ay la socdeen Maleeshiyadda Kooxda Alshabaab Taasi oo tirada Maleeshiyadda lagu dilay Duqeynta ka dhigaysa ilaa 17Dagaalyahan.
Gudoomiyaha Gobalka Gedo ee Dowladda Somalia ayaa sheegay in duqeyntan ay ahayd mid mudo lala raadinaya saraakiisha iyo ciidamadda Maleeshiyadda Kooxda Alshabaab taasi oo xalay sahashay in lagu duqeeyo gobalka Gedo.
Diyaaradaha Dagaalka Dalka Kenya ayaa looga shakinayaa in ay ka dambeeyaan Duqeyntaasi iyadoo aysan jirin weli wax war ah oo ka soo baxay Saraakiisha ciidamadda Alshabaab ee ah in laga dilay Saraakil iyo Ciidamo.
Dhawaan ayay ahayd markii sidan oo kale Diyaaradaha Dagaalka Dalka Kenya ay duqeyn dhanka cirka ah ku dileen Saraakiil iyo CIidamo ka tirsan Alshabaab ka dib markii lagu duqeeyay Saldhig Meliteri ay lahaayeen.